ဒေါက်တာဆာဆာ ကတော့ သတင်းကောင်း ပါး လိုက်ပြီ (ဝင်သာ ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ)…… – GaMone Media
Homepage / Local News / ဒေါက်တာဆာဆာ ကတော့ သတင်းကောင်း ပါး လိုက်ပြီ (ဝင်သာ ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ)……
ဒေါက်တာဆာဆာ ကတော့ သတင်းကောင်း ပါး လိုက်ပြီ (ဝင်သာ ဖတ်ကြည့်တော့ဗျာ)……
ဘယ်သူအကူအညီမှ မပါဘဲ သူလုပ်နိုင်တယ် သူမှာ နည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံ ယနေ့အ ချိန်ထိ မရှိသေးကြောင်းဒါကြောင့်တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာပြည် သူ လူထုဘက်မှာရှိနေကြောင်းနိုင်ငံတကာက မြန်မာ သံရုံးများလည်းသူနဲ့ ပြည်သူနဲ့ ပူးပေါင်းပါ ပြည်တွင်းက CDM မပါဝင်သေးတဲ့ထမ်းတွေလည်း CDMလုပ်ပြီး ပါဝင်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
CDMလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ် ပြုမှာ ဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်ထဲက စစ်သား‌တွေလည်း စဉ်းစားစေချင်ကြောင်းမဟုတ်ရင် အကုန်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ကြောင်း ထည့်ပြောပါသေးတယ်။ တွေ့သင့် တွေ့ထိုက်သူတွေ နဲ့ တွေ့ပြီး ပြောသင့်တာတွေလည်း ပြောပြီးပြီ ဆိုပါတယ်။
လာမယ့် သောကြာနေ့ UN တံခါးပိတ် အစည်းအဝေးပွဲDr. Sar Sar တက်ရောက်ခွင့်ရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားမလျော့ပါနဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်လုပ်ထားပါစစ်အာရှင် အမြစ်ပြတ်စေရမယ်။
ဘယ္သူအကူအညီမွ မပါဘဲ သူလုပ္ႏိုင္တယ္ သူမွာ နည္းလမ္းေတြ ရွိတယ္လို႔ အခိုင္အမာ ေျပာပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီကိုတရားဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံ ယေန႔အ ခ်ိန္ထိ မရွိေသးေၾကာင္းဒါေၾကာင့္တကမာၻလုံးက ျမန္မာျပည္ သူ လူထုဘက္မွာရွိေနေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာ သံ႐ုံးမ်ားလည္းသူနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ ျပည္တြင္းက CDM မပါဝင္ေသးတဲ့ထမ္းေတြလည္း CDMလုပ္ၿပီး ပါဝင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။
CDMလုပ္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ သူရဲေကာင္းေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ ျပဳမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္ထဲက စစ္သား‌ေတြလည္း စဥ္းစားေစခ်င္ေၾကာင္းမဟုတ္ရင္ အကုန္ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္ေျပာပါေသးတယ္။ ေတြ႕သင့္ ေတြ႕ထိုက္သူေတြ နဲ႔ ေတြ႕ၿပီး ေျပာသင့္တာေတြလည္း ေျပာၿပီးၿပီ ဆိုပါတယ္။
လာမယ့္ ေသာၾကာေန႔ UN တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝးပြဲDr. Sar Sar တက္ေရာက္ခြင့္ရပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားမေလ်ာ့ပါနဲ႔ ဆႏၵျပမႈေတြ ဆက္လုပ္ထားပါစစ္အာရွင္ အျမစ္ျပတ္ေစရမယ္။
Previous post ထိုင်းက ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ပိုင်တံခွန် ရဲ့ ထိရောက် လှ တဲ့ အကူအညီ တောင်းခံမှု
Next post လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ရင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း တစ်ခုကို ပြသခဲ့တဲ့ ထွန်းကိုကို